Ibex 35 Zvikamu uye Ibex 35 Inverso: zvimwe indices pamusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Ibex 35 Zvikwereti uye Ibex 35 Inverso: zvimwe indices pamusika wemasheya
Iyo Ibex 35 Zvikwereti uye Ibex 35 Inverso mamwe emamwe asingazivikanwe masheya indices uko vatyairi vadiki nepakati vanogona kuisa mari yavo. Chimwe nechimwe chazvo chine hunhu hwacho, asi nenzira ipi neipi inogona kuve imwe nzira mumisika yemari. Nekuti ivo vanofungisisa maviri akasiyana akasiyana mamodheru ekunzwisisa kudyara uye izvo zvinogona kubatsira zvakanyanya pane imwe nguva muhupenyu hwevatengesi.
Iyi kirasi ye indices mu equities inogona kumisikidzwa seyatsva sosi yekugadzira kudzoka kubva kune rakasiyana zano mu nzira yekubata mari. Hazvishamisi kuti aya mairi indices emasheya ayo achangobva kugadzirwa uye anogona kunge asina kucherechedzwa nechikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Kunyanya iyo yakatemerwa kudzosera mari nekuti inobvumidza kubatsirwa nekufamba kwakadzika kunounzwa nekuchengetedzwa kwakanyorwa pamisika yemunyika.
Kubva pane ino mamiriro ese, zvirokwazvo kuvhurwa kweaya matsva emusika wemari indices kumakambani inokurudzira kuwana mabhenefiti mumusika weSpanish wemusika. Zvekuti nenzira iyi, vatengesi vari muchinzvimbo chekuva new chiteshi kuti vagare vachitevera iyo shanduko yetsika idzi. Iko kune dhinomineta kune vese ndezvekuti ivo vanobatanidzwa mune yakasarudzika indekisi yemari inoshanduka yenyika yedu, iyo Ibex 35. Ndiko kuti, nemitengo yemusika wemasheya ayo anozivikanwa nehukuru hwavo capitalisation.
1 Ibex 35 Zvikamu: zvakagadziriswa mari
2 Migumisiro kune vanoita mari
3 Ibex 35 Inverso: kubheja pasi
4 Zvimwe zvekudyara: Inline Warrants
5 Dzimwe dzimwe indices
6 Zvakafanana chaizvo nemaarranti
Ibex 35 Zvikamu: zvakagadziriswa mari
Iyi yakakosha kwazvo index index chiratidzo chinobatsira kwazvo kune vanoita mari chinosanganisira kusiyana kwemitengo yezvivimbiso, pamwe nerubatsiro rwunowanikwa nekugovaniswa kwezvikamu uye zvimwe zvikwereti kumubati wemasheya zvavanopa. Izvi mukuita zvinoreva kuti vanodzokorora iyo tsika dzakanaka dzeIbex 35. Panyaya iyi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti iine zvinhu zvakafanana, kuverenga uye nzira dzekugadzirisa senge iyo inoreva kune nyika inosarudza. Asi mune ino kesi, achireva chete kumakambani ayo anogovera zvikamu pakati pevachagovana navo.
Pakati pemakambani akanyorwa anoita muripo uyu nemari, zvimwe zvezvakanyanya kukosha pane yakasarudzika equity index inomira. Sezvazviri mune chaiyo kesi dzeMedaset (10%), Endesa (7%), Repsol (6%) kana Iberdrola (5%) pakati pezvimwe zvakakosha. Chero zvazvingaitika, makambani aya anofamba nemari yekubhadhara nekudzoka pakati pe3% ne10%. Kuburikidza nemutero weakaunzi uyo unogadziriswa uye unovimbiswa gore rega rega uye ayo akabatanidzwa muIbex 35 Dividend. Sezvo nemamwe makwere ari munzvimbo yedu yepedyo.
Migumisiro kune vanoita mari
Semhedzisiro yezviito izvi mumisika yezvemari, hapana mubvunzo kuti zvakare zvichave nyore kuongorora purofiti inopihwa nemakambani kuburikidza nemubhadharo uyu. Kunge shanduko ine zvese zvehunhu zvinosangana nehunhu uhu. Ndokunge, modhi nyowani yekutarisa iyo shanduko yemaitiro ese ayo anogovera zvikamu asi kubva kune yavo indekisi uko makambani ese akanyorwa. Zvekuti nenzira iyi mabasa anofanirwa kuitwa nevashambadzi vadiki nepakati anofambiswa.
Kune rimwe divi, kumwe kugumira uko kunogadzirwa nesisitimu iyi mukotesheni hakukanganwike kana. Uye ndiyo iyo inonongedzera kuchokwadi chekuti makambani anogovera zvikamu izvo zvisiri muIbex 35 haabatanidzwe.Kune boka rakanaka remakambani anopa izvi zvakawedzerwa kukosha, senge Atresmedia, OHL kana Logista. Huye, izvo hazviratidzwe muIbex 35 Zvikamu sezvo zvine musoro kufunga kune rimwe divi. Kuve chimwe chezvinhu zvisina kunaka pane iyi nyowani nyowani yemari yenyika.
Ibex 35 Inverso: kubheja pasi
Iyo Ibex 35 Inverso indekisi, yechikamu chayo, inodzokorora mafambiro ezuva nezuva eiyo inosarudzika indekisi yeSpanish stock market, asi nenzira yakatarisana. Ndokunge, kuitira kuti varimari vagone kutora mukana weakaderera tsika ayo anochengetwa mumisika yemari. Icho chiri yakanyanya hasha sarudzo kupfuura yapfuura nekuti njodzi dzakakwirira. Hazvishamise kuti, kuburikidza nehurongwa hwekudyara iwe unogona kuwana mari yakawanda. Asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana, siya akawanda ma euro pamugwagwa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Kune rimwe divi, iyo nzira yekuverenga yeiyi nyowani stock index inosanganisa chinhu chitsva. Iko kwakafanana hakuna kuenzana zvakakwana kune iyo yeIbex 35 Zvikamu kubvira inotongwa nemamwe akasiyana parameter uye umo asiri ese ma profiles emari anogona kubatanidzwa nyore nyore. Uye zvakare, iri nyore kurudziro yekubheja pamitengo yepasi pasina kunongedzera zvimwe zvakanyanya zvehasha zvigadzirwa zvemari. Sezvazviri mune chaiyo nyaya yemabheranti, inopa kusagadzikana kukuru kunoita kuti mashandiro ayo awedzere kuve panjodzi.
Zvimwe zvekudyara: Inline Warrants
Iyo yekupedzisira ruzivo kuisa mari mune zvimwe zvigadzirwa zvemari zvakasiyana zvachose, asi izvo zvinochengetedza zvakajairika kugara uye ndiyo njodzi yekuita kwavo. Izvi ndozvinoitika kune nyaya dzeInline Warrants iyo French institution Societé Generalé yakagadzira. Mune ino chaiyo kesi ine se midziyo yepasi iyo iyo Ibex 35 indekisi. Ichi chigadzirwa chitsva chimiro che mabvumirano iyo inosanganisa imwe nyowani nyowani uye zvechokwadi yekutanga mashini. Imomo kana panguva yehupenyu hwakaenzana mutengo weiyo yepasi nhumbi unobata kana kudarika chero nguva chero mamwe mazinga akafanorongedzerwa, ezasi kana epamusoro, kukura kwacho kunotangira pamberi.
Nezve ichi chigadzirwa chemari, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune vamangwana varairidzi ivo vanotengeswa pamusika weSpanish wemusika zvichienderana nemitemo yekushandisa yechikamu chekutengesa che mvumo, zvitupa uye zvimwe zvigadzirwa zvine zvakafanana hunhu. Panguva yekubvumirana kwezvigadzirwa izvi, kutsauka mumitengo yavo ichaona kukanganiswa kwekutaurirana of the mabvumirano nekuda kwekukura kwekutanga uye kubviswa kwayo chaiko pamusika padyo nechikamu chekutengesa. Sezvawaona, icho chigadzirwa chakaomesesa kupfuura zvakapfuura uye zvinoda kudzidza kwakawanda pachikamu chako. Kuti tidzivise mamiriro asingadiwe kune vashoma nepakati varimi. Ndokunge, shure kwezvose, izvo ndezvei nezve.
Dzimwe dzimwe indices
BME yatanga kutepfenyura, kuburikidza nevakuru vanopa ruzivo rwemusika wemasheya, indices dzekushomeka uye marongero ane sarudzo paIbex 35 iyo yavakagadzira munaGumiguru apfuura. Aya maIndices, ayo anozoburitswa pakupera kwechikamu chega chega, anoita kuti zvikwanise kuyera kusagadzikana kwemusika uye kuratidza mashandiro eimwe nzira dzekudyara kuburikidza nezvigadzirwa zvinotengeswa paMEFF, musika unobva pazvinhu zveBME. Iyo indices nyowani yakaburitswa neBME ndeiyi:
El Vibex index ndiyo yakatarwa kusagadzikana indekisi yemusika weSpain. Inoyera kusanzwisisika kwekusarudzika kwesarudzo mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equity yekukura kwemazuva makumi matatu.
El Ibex 35 Skew Index iyo inoratidza shanduko yekusagadzikana skew mune sarudzo dzeIbex 35. Iko kusakendenga skew kunotsanangurwa sekusiyana kwekusagadzikana kwemutengo wega wega wekurovedza muviri.
El Ibex 35 Buywrite indekisi iyo inodzokorora chinzvimbo chekutenga mune ramangwana reiyi index index uye kutengeswa kusingaperi kwesarudzo dzekufona, nekudaro iri zano rakafanana nekutengwa kwedengu rakagadzirwa paIbex 35 nemari yekuwedzera kubva mukutengesa kwesarudzo.
El Ibex 35 Putwrite indekisi izvo zvinonyanya kudzokorora kutengeswa kusingaperi kwesarudzo dzinonzi Put. Iri izano rekusimudzira rine purofiti inogumira kune iyo premium yakapinda uye kurasikirwa kusingagumi.
Zvakafanana chaizvo nemaarranti
Chero zvazvingaitika, izvo zvigadzirwa zvakaenzana chaizvo nemvumo uye zvinozivikanwa nenyaya yekuti zvinounza njodzi huru kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa zvemari. Icho chiri cheichi chikonzero chaicho kuti iyi kirasi yemamodeli mune investment iwo haana kuitirwa kune ese mafaera ekudyara. Kana zvisiri, pane kudaro, kune rudzi rwevatengesi vane ruzivo rwakakura mune urwu rudzi rwekushanda kwakaomarara mumisika yemari. Zvekuti nenzira iyi, ivo vari mumamiriro ari nani ekuti vafambise kufamba kwavo mumisika yemari. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwawo kuti kusarudzwa kweizvi zvigadzirwa zvemari zvitsva haisiyo mhinduro yakanakisa yechikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Pakati pezvimwe zvikonzero zvekushaikwa kwezivo nezve ma mechanics eaya matsva ekudyara mamodheru. Iko kungwara hakuna kupokana kuti inofanirwa kuve iri dhinomineta yezviito zvavo. Nechinangwa chikuru chekuchengetedza yako mipiro yemari pamusoro pezvimwe zvakakosha zvekufunga. Zvekuti nenzira iyi, ivo vari mumamiriro ari nani ekuti vafambise kufamba kwavo mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ibex 35 Zvikwereti uye Ibex 35 Inverso: zvimwe indices pamusika wemasheya
Chikamu chemagetsi chinoshanda senzvimbo yekutizira mukudonha kwemusika wemasheya